मालपोतको सास्ती कहिले सम्म | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
मालपोतको सास्ती कहिले सम्म
Published On : ९ माघ २०७७, शुक्रबार १६:२८
सेवा लिन आएको ब्यक्ति चार दिन सम्म काम नहुँदा निराश भएर बस्पर्ने बाध्यात्मक अवस्था मालपोत कार्यालय गोरखामा छ । पहिले एक दुई दिनमा भएका काम अहिले धेरै दिन लाग्दा सेवाग्राही निराश र हैरान भएका छन् ।
अब कहिल्यै अर्को पटक काम लिएर मालपोत कार्यालय आउनु नपरेहुन्थ्यो भन्ने भान अहिले सेवा लिन आएकाहरुलाई भएको छ । तर के गर्नु जति दुःख सास्ती भएपनि सेवा लिन नआई सुखै छैन । यो बाध्यताका बिच मालपोत कार्यालय गोरखाले आफ्नो सेवा सुधार्न भने सकेको छैन ।
मालपोत कार्यालयमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी छैनन् । फाँटका कुर्सी खाली छन् । कार्यालय प्रमुख नभएको चार वर्ष बित्यो । कार्यालय भित्र आफ्ना समस्या होलान् ।
तर यी बिभिन्न समस्या देखाएर सर्वसाधारण सेवाग्राही सेवा पाउनबाट बञ्चित हुनु हुँदैन । कार्यालयमा कर्मचारी हुनु नहुनु सँग सेवाग्राहीको सास्ती जोडिनु हुँदैन । त्यो ब्यवस्थापन कार्यालय मिलाउनुपर्छ । आफु भन्दा माथिल्लो निकायलाई पटक पटक दरबन्दी अनुसार कर्मचारी थप्न दबाव दिनुपर्छ । जिल्ला प्रशासन मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत पनि कर्मचारी थप गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । अन्य जिल्लाका मालपोत कार्यालयमा भन्दा गोरखामा किन कर्मचारी कम छन् भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
कर्मचारी नभएको बाहनामा सेवा फितलो हुनु हुँदैन । मालपोत कार्यालयमा टाठाबाठा सेवाग्राहीको काम छिटो र सोझा साझाको ढिलो हुन्छ भन्ने गुनासो आईरहन्छ । लेखापढी गर्नेहरुले फाईल घुमाउने, आफ्नो चाहना अनुसार कर्मचारीको मिलेमतोमा काम गर्ने गुनासो सँधै आईरहन्छ । यस्ता गुनासो निमिट्यान्न पार्न नसकिएला तर सुधारको संकेत पनि नदेखिँदा कतै सरकारी सेवामा बसेकाहरु जनताप्रति उत्तरदायि नभएका होईनन् भन्ने आशंका नागरिमा उब्जिन थालेको छ ।